Xeer Ilaaliyaha Somaliya oo u jawaabay Kenya - BBC Somali
Xeer Ilaaliyaha Somaliya oo u jawaabay Kenya
11 Oktoobar 2015
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in codsiga dowaldda Kenya ee ah in muranka sohidnta abdda labada dal lagu xaliyo meel ka abxan maxkamda QM ay muujinayso in dowladda Kenya ay ogsoontahay sal la'aanta qaanuuneed ee doodda ku wajahan sheegashada Badda.
Dawladda Kenya ayaa isbuucan u gudsbisay maxkamada fadhigeedu yahay Heeg dalab deg deg ah oo ay ku codsanayso in maxkamadu ay joojisa qaadida dacwadaasi ay Somalia gaysay maxkamada bishii Augsut.
Taasi abdalkeeda Dawalda kenya waxa ay doonaysaa in Soomaaliya lagu khasbo in ay wadahadal murankaasi ku saabsan ay la gasho Nairobi.
Haddaba Xeer ilaaliyaha Soomaaliya DR Axmed Cali Daahir ayaa kula xariiray khadka tilifoonka ee Muqdisho. Waxaan marka hore weeydiiyay sababta ay ku diideen dalabka kenya ee ah in meel ka abxsan maxkamda lagu wada hadlo